Wararka Maanta: Arbaco, Oct 17, 2012-Madaxweynaha Puntland oo sheegay in ciiddii doonaysa inay ka Qayb-gasho Tartanka Madaxnimo ee Puntland ay sameysato Xisbi
Faroole ayaa hadalkan ka sheegay degmada Eyl ee gobolka Nugaal halkasoo uu kula hadlayay boqolaal qof oo isugu soo baxay halkaasoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu ku joogay socdaallo shaqo.
"Ciddii doonaysa inay u tartanto madaxnimada Puntland waa inay xisbi siyaasadeed sameysato, waayo waxaa loo guurayaa hanaanka axsaabta, taasoo aan horay uga jirin Puntland," ayuu yiri madaxweynaha Puntland oo intaas ku daray in howshan ay tahay mid aan horay loo qaban.
Sidoo kale, madaxweynaha Puntland wuxuu ka hadlay ammaanka iyo waxqabadka xukuumadiisa, isagoo sheegay in howlwadeennada maamulkiisa ay intooda badan yihiin dad dhallinyaro ah oo aqoon leh, isagoo xusay inay horumarro badan kusoo kordhiyeen Puntland.
"Ammaanka Puntland waa mid wanaagsan, waayo shacabka iyo ciidamadu waxay si wadajir ah uga shaqeeyeen sidii ammaanka loo adkeyn lahaa... goobaha khatarta badani ay ka jiri jirtay waxaa ka mid ah Gaalkacyo maantana waa nabad," ayuu yiri madaxweynaha Puntland, Cabdiraxmaan Faroole.
Hadalka madaxweyanha Puntland ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli lagu wado inay sannadka soo socda ee 2013-da ka dhacaaan 21-ka degmo ee Puntland ay ka kooba tahay doorashooyinka golaha deegaanka.
Xisbiyada siyaasadeed ee is-diiwaangeliya ayaa tartankaas ka qaybqaadan doona, iyadoo asxaabtu ay ku tartami doonaan kuraasta golayaasha deegaanka, iyadoo ay ka dhici doonaan deegaannadaas tartamo kale oo ku baarlamaanka Puntland ah.
Madaxweynaha Puntland, C/raxmaan Faroole ayaa xilka madaxweynimo ee Puntland ku guuleystay sanadkii 2009, kaddib markii uu tartan la galay murashaxiin fara badan oo isku soo taagay qabashada xilka madaxnimo ee Puntland.